galmudugnews.com » Khaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab
Home » WARARKA » Khaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab Khaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab admin on
Jan 21st, 2013 //
No Comment Views 1613209London (Galmudugnews) Nin ka mida Odayaashii beesha Sacad Habargidir oo lagu magacaabo Khaliif weyne ayaa shalay galab Tel Conference uu ku jiray dagaal ooge Cabdi Qaybdiid ka aflagaadeeyay beelaha Sacad Habargidir gaar ahaan Curadka beesha Sacad ee Cabdalle ,iyo sidoo kale Reer Jalaf .Reer Ayaanle,Reer Sinoole,Reer Qurdhaale,Indhayar iyo Reer Maxamed.
Khaliif weyne oo ku caanbaxay isku dirka beesha Sacad wuxuu yiri ” Cabdi Qaybdiid dadka oo dhami gadaashaada ayey taagan yihiin sidaas darteed ha u joojin jufooyinka Maaynooratiga ah ” Kuwa laga awooda badan yahay” ee kaa soo horjeeda”
Khaliif weyne hadalkiisa wuxuu ula jeeday beelaha diiday guud ahaan qadiyada dagaal ooge Qaybdiid gaar ahaan Curadka beesha Cabdalle Sacad oo dhamaantood taageeray hogaamiyaha Ruuxiga ah ee Korneyl Cali Baashi.
Hadaba todobaadkaan waxaan bilaabi doonaa qormo loogu magacdaray KHALIIF WEYNE WAA KUMA?
Waxaan bulshada Soomaaliyeed uga sheekeeyn doonaa shaqsiyada ninka u gefay beelaha Sacad Habargidir si ay u garwaaqsadaan ninka uu yahay anagoo ugu dambeyn soo gudbin doona codkiisa maadama uu shirkaas ahaa mid uu abaabulay nin aqoonta ka liita oo lagu magacaabo Cabdi Casiis Xogolof kaas oo lagu fara xumeeyay Xabsi ku yaal dalka Mareykanka.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 136695 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31742 hitsContact US - 30234 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 25785 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25487 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25006 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23771 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 22803 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22237 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 21827 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21186 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 20896 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 20802 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20517 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19773 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19689 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19063 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18352 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17666 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17460 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17412 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16798 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16487 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15416 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15253 hits Home Contact US